Yaadannoo Dhaabasaa Waaqjiraa
Seenaan teessoo magaalaa guddoo Oromiyaa Finfinnee irraa buqqisuuf koloneeffatamuu ummata Oromoo waliin walitti hidhata. Kan fagoo dhiifnee, kan dhiyeenyaa yoo ilaalle, ragabaa jiraataa qabna.
1. Bara 1995 “Caffeen” Oromiyaa magaalaa Finfinnee galma yeroo san Ministeera Dinagdee fi Maallaqaa Itoophiyaa kan fuullee 6-kiiloo jiru taa’ee ture, yaada magaalaa addaa tolfachuu kaasee ture; garuu mormiin waan ka’ee tureef yeroof irra darbame. Yeroo san warra morman keessaa Ob Reediwaan kan magaalaa Asallaa irraa bakka bu’anii dhufanii fi jaarsa Shawaa Lixaa, magaalaa Gindoo irraa eebbaaf dhufan turan.
2. Caffeen Oromiyaa bara 2000 walgahii dhumaa magaalaa Adaamaatti taa’een Adoolessa 13 magaalaan guddoo Oromiyaa Adaamaa akka ta’u labse. Labsii kana jabinaan kanneen dura dhaabbatan keessaa Ob Hayilee Gabree isaan tokko turan.
3.Murtiin kun bara 2004 keessa mormii guddaa waan kaaseef barattoota Oromoo 300 Yunivarsitii irraa aryachiisee jira; waajjirri Maccaa fi Tuulamaa cufamee jira; Gaaddisaa Hirphasaa fi Alamaayyoo Garbaa galaafatee jira…kanneen dhibbaan lakkaayamn mana hidhaatti guursise.
4. Murtiin dhala Oromoo akkanaan nyaate kun diddaa ummataatiin bara 2005 keessa deebi’amee ‘shaarame’. Yeroo san kan jedhame, Adaamaan magaalaa dinagdee Oromoo akka taatu, Finfinneen immoo magaalaa seenaa akka taatu murteesse. Murtiin kun garuu mortii mooksaa fi gowwoomsaa malee murtii dhugaa miti. Amma illee akka seera Caffee Oromiyaatti magaalaan guddoo Oromiyaa Adaamaa dha.
5. Bara kana keessa immoo sababa misoomaa fi qindoomina jedhuun magaalaa Finfinnee hundee buqqisuuf yaaliin godhame guddattoota Oromoo fi qeerroo Oromoo dhibbaan lakkaayaman galaafatee, kaaan manneen hidhaatti guursisee jira.
Akka namuu yaadatutti, Finfinneen seenaanis teessumaanis wiirtuu mootummaa Oromoo ti. Oromoon otuu hin koloneeffatamiin dura Finfinnee tuujuba godhatee jiraachaa ture.Kanaaf, ragaan geerrarsa, afoolaa fi seenaa Oromoo ti. Walaloon bifa geerrarsaan armaan gadiitti jiru kun waa’ee Finfinneen Menelikiin qabamuu, kan Oromoon tokko ‘Inxooxxoo dhaabatanii’ jedhee aarii isaa geerarsaan dhageessisee dha. Kun amma illee dhaloota dhalootatti darbaa jira.
Oromoo kan goodhu qabu hedduu jira. warra qe’e abba saaniitii isaan buqisaa jiraniif akka abiddan tapachaa jiran guuttummatti ibsuu qaba. Jiruun isaan amma hojjetaa jiran booda akka isaan ballessu itti himuun barbaachisaa dha.
Ummatni Oromoo warra mirga isaa kabajani irratti hamaa hinyaadu. Yaadees hinbeeku. Nagaan isaani wajjiin jiraachuu ni danda’a. Garuu sabni Oromoo qe’ee dha buqa’u fi salphachuu hin fudhatu. Kanarra na ga’e jedhaa jira. Diddaa ibsachuun waraqaan yookii immoo hawaasa adunyaatti iyyannoo dhiyeeffachuu qofan waan ta’u miti. Sabni adunyaa kuni itti dhaga’ame, gaddeefi (dhukkubsateef) akka saba kana bira dhaabatuuf ilmaan Oromoo qabsoo dhugaa biyya abba saanii irratti godhanii agarsiisu qabu. Qabsoo dhuugaa jechaan bakka farri diinaa hojjetama jiru sanatti tarkaanifii cimaa fudhachuu jechuudha.
Deebiin isaa hiriira qindaa’ee, mormii fi hojii qindaa’ee itti fufiinsa qabu gaggeessuu dha. Finifinnee keessattis ta’ee Washingteen, London yooki immoo Melborn tti ta’u mala. Lammiin kun hiriiraa Finfinnetti ta’u kessatti qooda fudhachuun dirqama isaatti. Ilmaan Oromoo magalaawwan Oromoo adda addaa keessa jiraatan warra Finfinnen waliin dhaabbachun hiriira godhuu barbaachiisaa dha. Waan harr’a Finfinne ta’e bor Jimmatti, Naqamtetti, Asallaatii, Shaashmanee fi Awaasaatti ta’uuf deema. Saboonni cunqurfamoon kibbaas gargaarsa (dirmannaa) akka godhan gaafatamuu qabu.
Oromoon biyya ambaa jirruu otoo of hinqusatiin gargaarsa gochuu qabna. Qabsoo Afrikaa Kibaa irra, intifaada daa’imman Filisxeemii fi socho’ina Gur’achii Amerikaa mirga lammumma gonfachuuf godhan irra barumsa fudhachuun amma yeroo keenya. Jecha Fredirick Douglas irra deebina: Farra dinni nurrarratti rawwataa jiru kana ballesuuf qabsoo siyaasaa fi qabsoo irreetti mayii bawu qabna. Soodaan habadu. Humna fi qabeenyaa keenya qabsoo bilisummaaf haa wareegnu.
Galii Duula Keenyaa
Finfinnee ilaalshisee waantoti nu guutamuu qaban hedduu ni jiru. Isaan keessa garuu kanneen armaan gadii sadan dursa kan kennuufii qabnuudha.
1) Maqaan Addis Ababa jedhamu maqaan koloneeffattuu waan ta’ef haqamuu qaba. Magaalicha maqaa ganamaatti deebi’u qabu. Finfinnen Magaalaa guddoo Oromoo fi Oromiyaa ture; ammas sun seenaanis ta’ee seeraan kabajmuu qaba.
2) Ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaawaman kan Saahile Sillaaseen fi Minilikin qalaman, hidhaan daraaraman fi garbomfataman kan ittiin yaadataman waltajjii fi siidaan akka ijaaramuuf dhiibbaa gochuu qabna.
3) Finfinnen waltajjii jarmyoota Oromoo hundaati. Afaanii fi aadan Oromoo dhiibbaa malee Finfinnetti dagaagu qaba. Oromoon miliyoona walakkaa ta’an Finfinne otoo jiraatanii afaan saanii akka fedhanitti dhimma itti ba’u dadhabuun saanii yakka guddaa dha. Aadaa fi eenyumaa Oromoo Finfinneetti akka dagaaguuf waan dandeenyu mara gochuu qabna.
Amma illee Adooleessa 13, kan yaadannu, godaannisa kaleessaa, kan har’a illee dhalattootaaa fi guddattoota Oromoo ajjeesaa fi hiisissaa jiru waliin ta’a. Ammoo kan nu boonsu, dhalooti keenya kunneen wareega gatii qabu baasuu isaanii ti; dhaloota du’a sodaatanii seenaa fi eenyummaa isaanii dabarsanii hin kennnine kumaatamaan horachaa adeemuun keenya guyyaan Bilisummaa dhiyaachuu isaatiif wabiidha. Ni moona!!